(VIDEO) Wafdi horudhac u ah madaxweyne Farmaajo oo soo gaaray magaalada Garowe kana warbixiyay socdaalka madaxweynaha iyo macnaha uu xambaarsan. | puntlandi.com
(VIDEO) Wafdi horudhac u ah madaxweyne Farmaajo oo soo gaaray magaalada Garowe kana warbixiyay socdaalka madaxweynaha iyo macnaha uu xambaarsan.
Wafdi heer Federaal ah oo hordhac u ah safarka madaxweynaha dowladda federalka Soomaaliya, Madaxweyne Farmaajo uu ku imaandoono Puntland, ayaa maanta soo gaaray Garoowe. Wafdigaan waxay ka kooban yihiin, Xildhibaano iyo Saraakiil ka socda Madaxtooyada Soomaaliya.
Diyaargarow xoogan oo lagu soo dhoweynayo Madaxweyne Farmaajo ayaa haatan ka socda caasimadda Puntland, iyadoo waddooyinka laamiyada ah iyo barxada weyn lagu xardhay calanka Puntland iyo calanka dowladda Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa qorshuhu inuu Puntland kala qeybgalo dabaal dega 8-da January, xiligaasi oo loo dabaal degayo sanadguuradii 4-aad ee kasoo wareegatay markii la doortay Madaxweyne Gaas.
Socdaalka madaxweyne Farmaajo uu ku imaandoo Puntland waxaa lagu sheegay inuu yahay socdaalkii ugu balaarnaa, isagoo isaga kala gudbidoona Puntland iyo gobolada dhexe, sida uu sheegay Agaasimaha Baratakoolka Madaxtooyada Siciid Maxamed Warsame iyo Xildhibaan Maxamuud Axmed Ciise Maash.
Xildhibaan Axmed Ciise Maash, ayaa sheegay madaxweyne Farmaajo inuu Puntland usido mashaariic balaaran oo uu dadweynaha hortooda ka sheegidoono, wuxuuna shacabka ugu baaqay inaan soo dhowaynta madaxweynaha iyo waftigiisa loo kala harin.
Halkaan ka daawo wafdiga yimid Garowe.